သက်ဝေ: အသွင်တူ၏ မတူ၏
Kay July 5, 2010 at 10:50 PM
ဟုတ်မယ်နော်..ပုံမှာတောင်..မသက်ဝေ က..ငုံ့ငုံ့ လေး ပြုံးပြီး.. ဟိုက တော့..မော့မော့ကြီး ပြုံးနေရော...း)
khet myint myint July 5, 2010 at 10:59 PM
အပေါ်က အရုပ်နှစ်ရုပ်က တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ် ။ ကိုယ်နဲ့ တသဝေမတိမ်း အကြိုက်တူနေကြတဲ့သူချင်းဆိုရင် လည်း အချိန်တခုကြာရင် ပျင်းစရာကြီး ဖြစ်လာမှာ ၊ အကြိုက်တူတော့ လုနေရတာတွေ ရှိသမို့လား ။ တခါတလေ အဲလိုတွေးမိတာပါ :D
nu-san July 5, 2010 at 10:59 PM
အမရယ်.. ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. တချို့အကျင့်တွေကတော့ အမနဲ့ ကျနော် ချွတ်စွတ်တူတယ်.. ဥပမာလေ.. အနားကပ်မှ လုပ်တတ်တာမျိုးတို့ ပြီးတော့ စနေသမီး စိတ်တိုတာ ဒေါသထွက်တာချင်းလည်း တူတယ်..
မမနဲ့ မမ ကိုကြီးတို့ စိတ်သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်လို့သာ အိမ်ထောင်ဖက် ဖြစ်ကြတာပေါ့ အမရယ်.. အဲဒါ အရေးအကြီးဆုံးပဲ..မမ ကိုကြီးကလည်း ပြောတတ်တယ်နော်..
အဟိ.. သဘောကောင်းတယ်ဆို စင်ကာပူလာလည်ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ် မဟုတ်လားမမ.. :D
Anonymous July 5, 2010 at 11:04 PM
ကြားထဲက အောချက်ကအရုပ်နှစ်ရုပ် ဓါးစာခံ ဖြစ်ရှာလေတယ်
Anonymous July 5, 2010 at 11:14 PM
း) အမတို့ နားလည်မှုရှိပုံလေးက အားကျစရာ ...
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) July 5, 2010 at 11:16 PM
အရုပ်နဲ့ စာက လိုက်တယ် အမ။
ဖြူ July 5, 2010 at 11:28 PM
T T Sweet July 6, 2010 at 12:03 AM
၂။ အပေါ်ကပုံက အရမ်းသရုပ်ပါတယ်။
၃။ ကိုကြီးအေးတဲ့အကြောင်း ဖောက်သည်ချမယ်။
ဟိုတစ်ခေါက် NUS မှာတွေ့တော့ များက ၀မ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်တာကို ... အန်တီသက်ဝေရဲ့ကိုကြီးက အေးဆေးပဲဗျာ ... ယုံပါတယ်...ယုံပါတယ် ...
၄။ အန်တီသက်ဝေကို ပြာလောင်တယ်လို့ မထင်ပေါင် ... များနဲ့ ပြိုင်မလား ...
ဇွန်မိုးစက် July 6, 2010 at 12:07 AM
အစ်မလည်း စနေသမီးပဲလား။ တူနေတယ်ဗျ အကျင့်စရိုက်တော်တော်များများ။ ပိုခင်သွားပြီ။း))
ပုံရိပ် July 6, 2010 at 12:24 AM
အစ်မ သက်ဝေ...စုံတွဲတွေ လင်မယားတွေက တချို့ နေရာတွေမှာ တူပြီး၊ တချို့နေရာတွေမှာတော့ ဖြည့်ဖက် (compliment) ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ထင်မိတာပဲ။ အစ်မတို့က တူလည်းတူပြီး ဖြည့်ဖက်လည်း ဖြစ်တယ်လေ...။
mae July 6, 2010 at 1:30 AM
ကျေနပ်ပါတယ် ဆရာမ၊ ဖေဖေနဲ့ မေမေအကြောင်းဖတ်ရသလိုပဲ၊ ဟတ်ဟတ်.. အကိုကြီးပြောတာလဲ ဟုတ်တာပဲ၊ အဓိက တူရင် ပြီးရောနော်.. အကုန်တူနေလဲ ပျင်းစရာကြီး :P
စာရေးမကောင်းလို့ comment ရှည်ရှည်မရေးတတ်တာ မမသက်ဝေ၊ ဒါပေမယ့် ဖတ်ပြီး ပြုံးနေတယ်၊ မမသက်ဝေနဲ့ အကိုကြီးနဲ့ အမြဲပဲ ဒီလို ရွှတ်ရွှတ်နောက်နောက်နဲ့ နေနိုင်ပါစေ
P.Ti July 6, 2010 at 1:38 AM
အမရေ... ရေးထားတာတွေဖတ်ပြီး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် နဲ့ ထောက်ခံနေတာ... ဟားဟား။ ကိုကြီးက တကယ်အေးတာကိုး။
ပြထားတဲ့ ပုံက ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမှာ.. အမက မော့တော့တော့ဖြစ်နေရမှာလေ... ဟားဟား..
စိတ်စေတနာကောင်းတာတူတာလည်း ဟုတ်ပါပေမယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် မတူတော့ ပျင်းစရာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့... ဟုတ်ဘူးလား :D
Anonymous July 6, 2010 at 4:22 AM
ကိုကြီးဘာလို့ ဆရာဝန်လုပ်တာလဲမသိဘူးနော်.. အင်ဂျင်နီယာလုပ်ရမှာကို။
ကိုယ်တို့လဲ ဘာတူလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ အင်း.. စိတ်ပုပ်တာခြင်းတူတယ် (နောက်တာမဟုတ် အဟိဟိ။)
မမသီရိ July 6, 2010 at 10:11 AM
ဖတ်ဖူးတဲ့ စစ်တမ်းလေး တခု အရ တော့ . ရိုးမြေကျ ပေါင်းဖက်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တွေမှာ တူတဲ့အချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ် တဲ့.. မျက်နှာ ပုံပန်းသဏ္ဌန်တွေဟာ လဲ အနည်းနဲ့အများ တူတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားတယ်.. မျက်နှာသွင်ပြင် အလွန်တရာ ကွဲပြားနေတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေက တော့ မတည်မြဲဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအတော်များသတဲ့.
မသက်ဝေ တို့ ရုပ်ချင်းဆင်ကြသလား..း)...
(နောက်ထပ် စာကောင်းလေး တပုဒ်ဖတ်ရအောင် အစ ဆွဲ ထုတ်ခဲ့ တယ်...း)...
နေ၀သန် July 6, 2010 at 11:42 AM
ညီမလေး July 6, 2010 at 11:55 AM
ဟုတ်တယ် မမသက်ဝေ .. ပါးနဲ့မားလည်း အသွင်တော်တော်များများ မတူကြဘူး ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့၂ယောက်လုံးမှာ သဘော၊မနောဖြူတာ ၊ မိဘမောင်ဖွားတွေကို စောင့်ရှောက်တတ်တာ ၊ နားလည်ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့ စတဲ့ စိတ်စေတနာတွေတူကြတယ် ။ သူတို့ အသွင်မတူပေမဲ့ အဲ့ဒီ စိတ်စေတနာတူလေးတွေကြောင့် ညီမလေးတို့တွေ ခုလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိူင်တာလို့ ထင်တယ် ။ မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ မြင်လို့ရတဲ့ အသွင်တူတာထက် ၊ နှလုံးသားနဲ့ကြည့်လို့ ခံစားလို့ရတဲ့ အမြင် တူဖို့ပိုအရေးတယ်လို့ ညီမလေးတော့ မှတ်ယူတယ် ..
Thant July 6, 2010 at 11:59 AM
ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီလိုက်တာ....နတ်ဖက်တဲ့စုံတွဲဆိုတာ ဒါမျိုးကိုခေါ်တာထင်ပါရဲ့... :)
Anonymous July 6, 2010 at 12:57 PM
စိတ်ပုတ်တာ၊ ထစ်ခနဲဆို ဒေါသထွက်တာ၊ မြန်မြန်ပြန်ပြေတာ၊ အလုပ်လောဘကြီးတာ၊ ဝီရိယရှိတာ၊ ကူညီတတ်တာ - အားလုံးတူ၊ တူလွန်:လို့ ရန်ခဏခဏဖြစ်ရတယ်
တယောက်နဲ့ တယောက် ဓလေ့စရိုက် အမူအကျင့် အသွင်အပြင်တွေ အကြိုက်တွေချင်း မတူညီကြသော်လည်း တကယ် အရေးကြီးတဲ့ ရင်ထဲက အခြေခံ စိတ်နေ စိတ်ထားတွေ စေတနာတွေ တူညီကြလို့ အခုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် လက်တွဲနိုင်တာ..
မီယာ July 6, 2010 at 1:35 PM
အမရေ မန့်လို့မရလို့... ကိုယ့်အကြောင်း ပြန်ဖတ်နေရသလိုပဲ
မိုးငွေ့...... July 6, 2010 at 4:05 PM
ဟုတ်တယ် လင်မယားဆိုတာ အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍန်တူတာထက်..စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ဖို့က အဓိကအရေးအကြီးဆုံးပါ...။ ဒါမှလဲ ဘ၀တစ်သက်လုံးလက်တွဲဖော်စစ်တော့မှာပေါ့..။
မသက်...ပို့စ်လေးသိပ်ကောင်းတယ် အရုပ်ကလေးကြိုက်တယ် ချစ်စရာလေး...။ တကယ့်လူပုံလေးတွေလဲ တင်ပေးဦးလေ..။
pandora July 6, 2010 at 9:54 PM
မသက်ဝေတို့နှစ်ယောက် စေတနာကောင်းတဲ့နေရာမှာ တူတာတွေ ရှိသေးတယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို ဆိုင်မှာပဲ လိုက်ကျွေးကျွေး အိမ်မှာပဲချက်ပြုတ်ကျွေးကျွေး တက်ညီလက်ညီ မညည်းမညူ ကျွေးမွေးပြုစုတတ်တာ။ (ရှလွတ်)
အပြုံးပန်း July 6, 2010 at 10:22 PM
တခါတည်း တွေ့ဖူးရုံနဲ့ နှစ်ယောက်သား နားလည်မူအပေါ် တွေ့မြင်ခံစားမိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အကိုကြီးပေါ့၊
စိတ်ရှည်မယ့် သဘောကို ခံစားမိပါတယ်။
Moe Cho Thinn July 7, 2010 at 12:37 AM
နှစ်ယောက်စလုံးကို သိနေတော့ ဖတ်ရတာ ပိုကြည်နူးမိတယ်။ ငယ်ကအချစ်မို့ အနှစ်တရာမက ချစ်ခင် နားလည် ကြည်ဖြူနိုင်ပါစေ ကိုကြီးနဲ့ မမရေ..
tg July 7, 2010 at 1:28 PM
လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲပါပဲ... ၀ိရောဓိမကျတဲ့ မတူညီတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သာယာပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀လေးတခုပါလား...သူငယ်ချင်းကံကောင်းပါတယ်..
အဲ. မဟုတ်သေးဘူး.. နှစ်ယောက်စလုံး... :)
Nge Naing July 7, 2010 at 5:48 PM
Topic လေးက ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုပေါပြောသလို လာမယ်ကြာမယ်အထဲမှာပဲ ထည့်ထားလိုက်ပါနော့်။
တန်ခူး July 8, 2010 at 1:01 PM
သက်ဝေရေ... တို့ မျက်စိထဲမှာတော့ ချစ်စရာအကိုကြီးနဲ့ ချစ်စရာအမကြီး သိပ်လိုက်ဖက်ညီတဲ့စုံတွဲလို့ မြင်တာပဲ... ကျောင်းကတည်းက အမြဲသန့် ရှင်းသန့် ပြန့် နေတဲ့ စွဲမက်စရာအပြုံးနဲ့ အမကြီးရဲ့ ဖူးစာရှင်ဘယ်သူများလဲလို့ သိချင်နေမိတာ တွေ့ လဲတွေ့ ရရော အတော်လိုက်ဖက်တာပဲလို့ ကျေနပ်နေမိတာ... စေတနာလေးတွေ ကာရံညီတဲ့ အတွဲလေးကို အကိုရင်းအမရင်းလို တကယ်ချစ်မိတာပါ...
အင်ကြင်းသန့် July 8, 2010 at 8:45 PM
ဟုတ်ပ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ အစ်မတို့ စုံတွဲကိုမျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ်။ သက်ထက်ဆုံး အခုလိုပဲ ချစ်ခင်နားလည်စွာ ပေါင်းဖက်သွားနိုင်ကြပါစေ....။
ရွှေပြည်သူ July 12, 2010 at 11:50 PM
ဒီလို မတူတာလေးတွေ တူတာလေးတွေ ကြားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသာ အရေးကြီးတာပါနော် အစ်မသက်ဝေ... ညီမ အဖေနဲ့အမေဆို မတူတာတွေများတယ်... ဒါပေမယ့် ချစ်ကြတာပါပဲး))